Waxaan idinku soo dhawaynaynaa adiga iyo qoyskaagaba barnaamijka Wanka Hawaii WIC. Fadlan wac xaruntaada WIC ee deegaankaaga haddii aad wax su'aalo ah qabtid. Dhibaato ma ku qabtaa barnaamijka WICShopper? Email JPMA at WICShopper@jpma.com
A: Naasnuujintu waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsan ee aad u sameyn karto naftaada iyo dhallaankaaga. Waa caadi in hooyooyinka ay su'aalo badan ka qabaan naas-nuujinta ama ay u baahan yihiin taageero dheeri ah. Taasi waa ok! WIC waxay halkan u joogtaa inay caawiso. Xafiiskaaga WIC ee deegaankaaga ayaa leh khabiiro naas nuujin oo diyaar ah si ay uga jawaabaan su'aalahaaga oo kuu fidiya adeegyo kaa caawin kara inaad gaartid yoolalkaaga naas-nuujinta. Kaliya weydii!
Waa kuwan qaar dheeraad ah ihanaan iyo kheyraad in lagaa caawiyo in aad sii waddo naas nuujinta ka dib marka aad ku noqoto shaqada ama dugsiga.
A: Haa, waxaa jira dhowr raashin oo ay WIC oggolaatay oo leh xulashooyin dabiici ah. Xulashada dabiiciga ah waxaa lagu daraa miraha cunnada iyo khudradda ilmaha; Miraha iyo khudaarta darayga ah, barafeysan, iyo gasacadaha qasacadaysan, soymilk, tofu, baastada qamadiga oo dhan, iyo digirta qasacadaysan. Noocyada gaarka ah iyo noocyada, fadlan tixraac Liiska Cuntada ee WIC ogolaatay.
A: Maya. Siiriyaalka bariiska dhallaanka ahi ma aha cuntada WIC ee la oggolaaday iyada oo ay ugu wacan tahay heerarka sunta arsenic ee laga helay qaar ka mid ah badeecada bariiska carruurta ee carruurta. Haddii aad leedahay badarka dhallaanka oo qayb ka ah faa'iidooyinkaaga WIC, waxaad dooran kartaa dhallaanka dhalada ah, miro badan, badar, iyo badarka shaciir. Si aad waxbadan uga sii ogaato tan, riix halkan.
Ha iloobin inaad u soo qaadato jeegagaaga WIC ama kaarka eWIC inaad bakhaarka u soo qaadato!
Daaweyn cadaalad ah oo ixtiraam leh shaqaalaha WIC iyo shaqaalaha dukaanka. Haddii aan si caddaalad ah loola dhaqmin, waxaan la hadli karaa kormeeraha WIC. Waxaan waydiisan karaa agaasimaha WIC ama WIC Xafiiska Waalidka ee shirka ama dhageysiga haddii aan diidanahay go'aannada ku saabsan u-qalmitaankayga.
Cinwaankayga. Waxaan ku soo wargelin doonaa isbeddelka cinwaanka ama macluumaadka xiriirka. Waxaan codsan karaa xaqiijinta shahaadada (VOC) haddii aad ka guurto gobolka. Tani waxay sahlaysaa in ay WIC ku hesho gobolka cusub.
Weligaa ha u soo bandhigin inaad iibiso, bixiso, ama iibiso cuntadeyda WIC ama jeegaga. Tani waxaa ka mid ah in lagu soo diro internetka, ama ku soo celi dukaanka. Cunto kasta oo aan ku siinayo iibinta ama bixinta taas oo la mid ah sida cuntada WIC ee aan heley waxaa loo maleynayaa inay tahay WIC cunto. Waxaa la iga weydiin doonaa inaan dib u bixiyo barnaamijka cuntada.